နယူထရွန်ကြယ် သည် ဒြပ်ဆွဲအားပြိုကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်တည်လာသော သိပ်သည်းသည့် ကြယ်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့၏ မူလကြယ်များသည် အလွန်ကြီးမားလှပြီး ဆူပါနိုဗာ ဖြစ်စဉ်ပြီးမှ ဖြစ်တည်လာကြသည့် ကြယ်ဖြစ်သည်။ နယူထရွန်ကြယ်များသည် စကြာဝဠာတွင် အသေးဆုံးကြယ်များဟု သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အချင်းအားဖြင့် ၁၂-၁၃ ကီလိုမီတာ (၇ မိုင်) ခန့်သာရှိသည်။ နယူထရွန်ကြယ်များသည် ကြယ်တစ်ခုလုံးအား နူထရွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နူထရွန်များသည် အက်တမ်ထက် သေးငယ်သော အမှုန်များဖြစ်ကာ ပရိုတွန်ထက် အနည်းငယ်သာ ကြီးမားသည်။ နယူထရွန်ကြယ်များသည် အင်မတန် ပူပြင်းမည်ဟု ယူဆရပါသည်။ နယူထရွန်ကြယ်တစ်စင်းသည် နေထုထည်၏ အနည်းဆုံး ၁.၁ မှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသည်။ များသောအားဖြင့် အပူချိန်သည် ~၆×၁၀၅ K ရှိသည်။ နယူထရွန်ကြယ်တွင်ရှိသော သာမန်မီးခြစ်အရွယ်အစား အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် တန်ချိန်ပေါင်း ၅ ထရီလီယံနီးပါးခန့် အလေးချိန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
နယူထရွန်ကြယ် RX J185635-3754 အား မြင်နိုင်သော အလင်းထဲတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် တိုက်ရိုက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု
၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် Walter Baade နှင့် Fritz Zwicky ဆိုသူတို့က နယူထရွန်ကြယ်တည်ရှိကြောင်း အဆိုပြုခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ကြာသော် James Chadwick မှ နယူထရွန်ကြယ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
နယူထရွန်ကြယ်များသည် အင်မတန်မြန်ဆန်စွာ လှည့်ပတ်ကြသည်။ မွေးကင်စကြယ်များသည်လည်း တစ်စက္ကန့်လျင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လှည့်ပတ်ကြသည်။ နယူထရွန်ကြယ်များသည်ကား တစ်စက္ကန့်လျင် အကြိမ်ရာပေါင်းများစွာ လှည့်ပတ်ကြသည်။ အကြောင်းမူ အနီးအနားရှိ အဖော်ကြယ်ဆီမှ အရာဝတ္ထုများကို စုပ်ယူကာ အရှိန်တင်သကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။ အချိန်ကြာလာသော် လည်ပတ်နှုန်းသည် ကျဆင်းသွားကြသည်။ သက်တမ်းရင့်သောနယူထရွန်ကြယ်များသည် တစ်စက္ကန့်လျင် အကြိမ်ရေများစွာခန့်သာ လည်ပတ်ကြတော့သည်။
ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီနှင့် မစ်ဂဲလ်လစ်နစ် တိမ်တိုက်တွင် နယူထရွန်ကြယ်ပေါင်း ၂ဝဝဝ အထိ သိရှိထားသည်။ အများစုမှာ ရေဒီယို ပါလဆာများအဖြစ် ခြေရာခံမိထားသည်။ အချို့သော အနီးစပ်ဆုံး နယူထရွန်ကြယ်များမှာ RX J1856.5-375 (အလင်းနှစ် ၄ဝဝ အကွာခန့်) နှင့် PSR J0108-1431 (အလင်းနှစ် ၄၂၄ အကွာ) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့သိသည့် နယူထရွန်ကြယ်များ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အဖော်ကြယ်များ၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ဒွိနယူထရွန်ကြယ်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုများသည် ရှုပ်ထွေးလှသည်။ အဖော်ကြယ်သည် သာမန်ကြယ် သို့မဟုတ် ကြယ်ဖြူပု သို့မဟုတ် အခြားနယူရွန်ကြယ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ ခေတ်သစ်သီအိုရီများအရ နယူထရွန်ကြယ်များသည် တွင်းနက်အဖော်များဖြင့် တည်ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းဒွိစနစ်များသည် ဒြပ်ဆွဲအားလှိုင်းများ၏ အဓိကပင်ရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒွိကြယ်စနစ်တွင်ရှိသော နယူထရွန်ကြယ်များသည် X-ray များအား ထုတ်ပေးသည်။
Circinus X-1: ဒွိစနစ်နယူထရွန်ကြယ်မှ X-ray ရောင်ခြည်၊ (၂၄ ဇွန်လ ၂ဝ၁၅) Chandra X-ray Observatory
"On the Mass Distribution and Birth Masses of Neutron Stars" (September 2012). The Astrophysical Journal 757 (1): 13. doi:10.1088/0004-637X/757/1/55. Bibcode: 2012ApJ...757...55O. Retrieved on 14 May 2015.
"On the Maximum Mass of Neutron Stars" (19 November 2013). International Journal of Modern Physics 1 (28): 1330018. doi:10.1142/S021830131330018X. Bibcode: 2013IJMPE..2230018C. Retrieved on 14 May 2015.
Bulent Kiziltan (2011)။ Reassessing the Fundamentals: On the Evolution, Ages and Masses of Neutron Stars။ Universal-Publishers။ ISBN 1-61233-765-1။
Neutron star mass measurements
Nasa Ask an Astrophysist: Maximum Mass ofaNeutron Star။
Paweł Haensel; A Y Potekhin; D G Yakovlev (2007)။ Neutron Stars။ Springer။ ISBN 0-387-33543-9။
Baade, Walter (1934). "Remarks on Super-Novae and Cosmic Rays". Phys. Rev. 46 (1): 76–77. doi:10.1103/PhysRev.46.76.2. Bibcode: 1934PhRv...46...76B.
Tauris & van den Heuvel (2006), in Compact Stellar X-ray Sources. Eds. Lewin and van der Klis, Cambridge University Press http://adsabs.harvard.edu/abs/2006csxs.book..623T